Ethiopia: Hojjattoota UN 70 tahan Hidhaman | OROMOTV
Itoophiyaatti konkolaachistootni konkolaataa fe’iisaa UN 70 ol hidhaman – UN
Konkolaachistoonni konkolaattoota fe’iisaa Sagantaa Nyaataa Addunyaa (WFP) 72 ta’an Affaar, Samaraatti to’atamuu WFPn beeksiseera.
“Sagantaa Nyaataa Addunyaatiin qacaramanii hojjataa turan konkolaachistoonni 72 magaalaa Samaraatti to’atamuu ni mirkaneessina. Hojjattoonni kunneen maaliif akka hidhaman mirkaneeffachuuf mootummaa Itoophiyaa waliin haasa’aa jirra,” jechuun dubbi-himaan WFP Rooyitarsitti himan.
Oduun kun kan dhaga’ame, hojjattootni UN yoo xiqqaate 16 ta’anii fi miseensonni maatii isaanii magaalaa Finfinneetti to’atamuun ibsamu booda.
UN kaleessa galgala yoo xiqqaate hojjatoonni 16 miseensota maatii isaanii waliin jalaa hidhamu erga beeksise as Ameerikaan “hojjattoota dhaabbatichaa hidhuun na yaaddeesse,” jette.
Dubbii himaan Ministeera Dhimma Alaa Ameerikaa Need Piraayis, hojjattoonni UN hidhamuun “Ameerikaa ni yaaddessa” jedhan.
Itti aansuun “hidhaan eenyummaa bu’uura godhate tasuma fudhatama hin qabu,” jedhan.
AFP’n akka gabaasetti mootummaan labsii yeroo muddamaa bu’uureffachuun hojjettoonni UN hidhe dhalattoota Tigraay ta’uu hime.
Dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee fi iddoowwan kaanii heddumminaan qabamanii hidhamaa jiraachuu fi rakkoof saaxilamuu himatanis, mootummaan namni yoo yakkaan shakkame malee sababa eenyummaa isaa qofaan hidhame hin jiru jedhe.
Dubbi-himaan UN konkolaachiftoonni kunneen hidhamuu isaanii wayita beeksisan, “nageenyi isaanii akka mirkanaa’u, mirgi namoomaa fi seeraa isaanii akka kabajamu gaafataa jirra” jedhan.
Rooyitarsi gabaasa isaa keessatti Samaraatti konkolaachistoonni to’ataman eenyummaan isaanii ifoomu baatus, Sagantaan Nyaataa Addunyaa kana dura dhalattoota Tigiraay deeggarsa namoomaa naannicha akka geessaniif qaxaree ture jedhe.
Sagantaan Nyaataa Addunyaa hojjattooonni isaa jalaa hidhamuu kan himate ilaachisuun amma yoonaatti mootummaan Itoophiyaa ibsa hin kennine.
Mootummaan Federeaalaa Itoophiyaa ji’a tokko dura qondaaltota olaanoo UN torba “walabummaa biyyattiirratti yaaddoo uuman” jedheen biyyaa ariyachuun ni yaadatama.
Murtoo mootummaa hordofuun biyyoonni Lixaa fi UN tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhate komachuun, irra deebiin akka ilaalamu gaafataa turan.
Mootummaan Itoophiyaa hojjattoonni fi itti gaafatamtoonni dhaabbilee idil-addunyaa keessa hojjatan deeggarsa garaa garaa TPLF kennu jechuun himataa ture.
Itti dabaluunis konkolaatonni fe’uumsaa deeggarsa namoomaa fe’uun gara Tigraay imalan akka hin deebinee fi finciltoonni Tigraay waraanaaf itti dhimma bahu jechuun shakkii akka qabu mootummaan komachaa ture.